Miorina amin'ny endrika - Fanatanjahan-tena tokony hataonao isan'andro | Bezzia
Susana godoy | | fanatanjahan-tena
Fantatrao ve ny fanazaran-tena tokony hataonao isan'andro mba hanana endrika? Raha mbola tsy tena mazava tsara momba izany ianao, dia holazainay aminao fa tsy olana amin'ny fandaniam-potoana hiofana mandritra ny ora maro. fa afaka manao andiam-panatanjahan-tena maromaro isika ao anatin'ny fotoana fohy mba hahatsapana ho tsara kokoa.
Mazava ho azy, tsy maintsy ataonao isan'andro izany satria ny haingam-pandeha dia tsy hanana fialan-tsiny tsy manam-potoana ianao. Noho izany mila finiavana kely fotsiny ianao ary vonona! Ho hitanao ny fomba hahazoanao aingam-panahy haingana sy ny fomba ahitanao vokatra tsara, izay antony iray hafa manosika anay ihany koa. Nanomboka izahay!
1 Squats mba ho salama
4 Jumps Jacks
5 Deadlift ho tonga endrika
Squats mba ho salama
Tsy isalasalana fa izy ireo dia iray amin'ireo fototra lehibe amin'ny fiainantsika, amin'ny vatantsika ary amin'ny tanjontsika. Satria misaotra azy ireo hahatratra vokatra tsara foana isika. Hanamafy ny vatana ianao ary hampitombo ny metabolismaAry koa, raha manolo ny iray amin'ireo squats ianao amin'ny lanja, dia tadidio fa miasa amin'ny haben'ny hozatra ianao. Raha ny zavatra hitantsika dia iray amin'ireo hevitra foana ireo izay mahatonga antsika ho mendrika amin'ny indray mipy maso. Tsy ny tongotrao ihany no hisaotra anao fa ny kibonao sy ny lamosinao koa, indrindra indrindra.
Raha squats dia, Ny tosika dia tsy dia taraiky loatra amin'ny resaka maha-iray amin'ireo fampihetseham-batana tena atolotra ho tonga endrika. Noho izany, satria efa fantatrao ny momba azy, dia tsy maintsy ampiharinao izany. Miankina amin'ny vavoninao miankina amin'ny felatananao ianao, izay hipetraka amin'ny halaviran'ny sakan'ny soroka sy ny vatana mihinjitra miverina. Tsy maintsy midina sy miakatra hatrany ianao mampihetsika ny sandry fa koa ny faritra pectoral. Izy ireo dia mampiditra ireo vondrona hozatra lehibe, manatsara ny fihetsika ary manampy amin'ny metabolisma aza.
Mitovy amin'ireo teo aloha amin'ny fihetsika, na dia misy nuansa aza. Hiankohoka amin'ny tany ianao, hanampy anao amin'ny sandrinao hamelomana ny vatanao, ary koa ny tendron'ny tongotrao.. Nefa tadidio fa ny ezaka tsy hianjera amin'ny sandry, fa amin'ny kibo. Tokony hofehezintsika izy io ary hahatsapa ny hery ao anatiny, raha tsy izany dia hitondra sandry sy soroka be loatra isika, ka hiseho ny fanaintainana aorian'izany. Rehefa tsara toerana ianao dia tsy maintsy mitazona mandritra ny 15 segondra, izay hitombo arakaraka ny fivoaranao.
Mba hahafahantsika mamela andiana kaloria maromaro dia tsy maintsy miantehitra amin'ny fanampiana sarobidy avy amin'ny Mitsambikina Jacks. Izy io dia momba ny fanokafana sy ny fanidiana ny tongony amin'ny fitsambikinana kely rehefa mampiakatra sy mampihena ny sandry. Eny, fantatrao tsara izy ireo, satria iray amin'ireo famenon-kardio tena lehibe, izay ahitan'ny fo azy ireo haingana. Marina fa ny fanaovana kardio dia manana safidy hafa koa ianao toy ny milina toy ny elliptical na bisikileta. Fa raha tsy anananao ao an-trano izany dia ity safidy ity no ho be indrindra. Manana tady ve ianao? Avy eo azonao atao ihany koa ny mandingana azy ary jereo ny fiantombohan'ny fandoroana kaloria.
Deadlift ho tonga endrika
Tokony hialantsika amin'ny ampaham-panatanjahantena toy izany koa ny ampahany amin'ny asa. Satria tsy misy fisalasalana, izy dia iray amin'ireo mpiara-dia lehibe ananantsika eo amin'ny fiainantsika. Araka ny voalazan'ny anarany, mila maka ny lanjany mifanaraka amin'ny filantsika isika: mety ho dumbbells, bara na izay ananantsika eny an-tànany izany. Aza maka lanja mihoatra ny tokony hampiakarana ny soroka na hampandrosoanao. Miondrika ny lohalika ary mahitsy ny sandry alohan'ny hitazomana ny lanja. Ambonin'ny zava-drehetra, tsy maintsy mifoha isika fa tsy mihetsika izay mety hanimba ny soroka na ny lamosintsika. Amin'ity fampihetseham-batana ity dia hiasa ny mason'ny hozatra ianao, ankoatry ny fanamafisana ny faritra misy ny lozabe, ny vatan-kazo ary koa ny vody.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanatanjahan-tena izay tokony hataonao isan'andro mba hanana endrika
Ireo lohateny izay efa tonga ao amin'ny HBO